Ukuziphatha Kwe-Intanethi Kokuthenga Nokuthumela Kuvela Kanjani ku-2015 | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 4, 2015 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Ngikhuphukile eChicago e IRCE futhi ngiwuthokozela ngokuphelele umcimbi. Umbukiso mkhulu kakhulu kanginasiqiniseko sokuthi ngizowudlula wonke umcimbi unikezwe izinsuku ezimbalwa ngilapha - kunezinkampani ezithile ezimangalisayo esizobe sibhala ngazo. Ukugxila okuphelele emiphumeleni elinganisiwe yiyo yonke imibukiso lapha kuyaqabula futhi. Kwesinye isikhathi lapho ngiya kweminye imicimbi yezokumaketha, ezinye izikhathi kanye nokugxila kubonakala kushelela kude nezinkampani empeleni okumele zithole imiphumela yezezimali.
Izolo ngiye engxoxweni yokuxoxisana ne-UPS UGian Fulgoni, uSihlalo kanye noMsunguli weComScore lapho i-UPS ikhiphe khona unyaka nonyaka I-UPS Pulse ye-Online Shopper (imibhalo iyizixhumanisi ezingakwesokudla phezulu) kanti ucwaningo lukhombisa ukuthi izinguquko ezinamadijithi amabili ekuziphatheni kokuthenga online ziyaqhubeka nokuba yinto ejwayelekile.
Amaphuzu avelele avela ku-UPS Pulse we-Online Shopper
Ukuthenga okuncane nokwasendaweni - Okusha ocwaningweni lwalo nyaka, abathengi abaningi (93%) bathenga ezitolo ezinkulu. Bangu-61% abathengwa kulezi zindawo ngoba banikela ngemikhiqizo eyingqayizivele, ama-49% awatholanga abakudingayo ezitolo zendabuko kanti ama-40% bebefuna ukuxhasa umphakathi wamabhizinisi amancane.
I-Shopping Global - Ngaphezu kwalokho, u-40% wabathengi uthenge kubathengisi abangaphandle kwase-US, cishe cishe uhhafu (49%) babika ukuthi bakwenzile ukuthola amanani angcono, kanti u-35% uthe bafuna izinto ezingatholakali ezitolo zase-US.
Amandla Ezokuxhumana - Abathengi abaningi baxhuma emisebenzini yezitolo ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngokubika okungu-43% bathola imikhiqizo emisha kumasayithi wezokuxhumana. I-Facebook iyisiteshi esinethonya elikhulu kepha abathengi nabo bamukela izingosi ezibukeka njengePinterest.
I-Digital Commerce - Ukuthengisa kuyaqhubeka nokuvela njengoba abanye abathengi be-inthanethi becabanga ukusebenzisa ubuchwepheshe beselula esitolo: ama-33% athola ukuthi amalebula eshalofini e-elekthronikhi ayathandeka, ama-29% athe azobheka ukuphuma kweselula, kanti ama-27% athe avulelekile ukusebenzisa izikrini zokuthinta ukuthola imininingwane, ukuthenga noma uhlele ukulethwa.
Shipping Free - Ukuhanjiswa kwamahhala kuhlala kuyindlela ebaluleke kakhulu ngesikhathi sokuphuma ngokuya kwabathengi abaku-inthanethi abangama-77%. Abangaphezu kwesigamu (60%) bangeze izinto enqoleni yabo ukuze bafanele ukuthunyelwa mahhala. Ucwaningo lunikeza ukuqonda ukusiza abathengisi ukuthi bakhuphule ukuthengisa - ama-48% abathengi abaku-inthanethi bathe bathumela izinto esitolo, kanti u-45% walabo abathi bathenga okwengeziwe uma bethatha ama-oda abo.
Ukubuyiselwa Okungakhathazi - Ngokombiko, bangu-62% kuphela abathengi abanelisekile ngenqubo yokubuyisa online: ama-67% abukeza inqubomgomo yokubuyisa yomthengisi ngaphambi kokuthenga, ama-66% afuna ukuthunyelwa kwamahhala, ama-58% afuna ukungabi nankinga “akukho mibuzo ebuzwayo” buyisa inqubomgomo, kanti u-47% ufuna ilebula lokubuyisa elilula ukuphrinta.
Ukudiliva Okuhlukile - Uma kuqhathaniswa nocwaningo lwangonyaka odlule, abathengi abaningi bavulekele ezinye izindlela zokulethwa. Ngo-2014, u-26% uthe bakhetha ukuthi amaphakethe alethwe kwezinye izindawo ezingekho emakhaya abo, kulo nyaka ikhuphuke yaya ku-33%. I-UPS ihlola nokuthwebula i-self-service eydijithali emadolobheni athile njengamanje.
Ukulandwa Kwesitolo - Cishe uhhafu (48%) wabathengi abasebenzisa i-inthanethi basebenzise umkhumbi ukugcina ngonyaka owedlule, kanti ama-45% alabo abathengi bathenga ngokungeziwe lapho bethenga online.
Isihloko esisodwa sengxoxo ebesithakazelisa kakhulu kimi: abathengi shintsha iziteshi zokuthenga phakathi kweselula nedeskithophu. Amanani wokuguqulwa kweselula asasalele kakhulu kudeskithophu. Kulinganiselwa amazinga wokuguqulwa kweselula angama-0.5% kuya kusilinganiso esiphakathi esingu-3% sedeskithophu. Lokho akusho ukuthi umthengi unjalo ayiguquki… Zivame ukushiya phakathi kwalokhu okubili. Eqinisweni, uMnu. Fulgoni uthe ubukhulu bendawo enkulu yokubuka amafoni amasha njenge-iPhone 6+ bungaba nesibopho sokwenyuka okuncane kosayizi wesivumelwano sokusetshenziswa kwemali namazinga okuguqula.
Abadayisi badinga ukuqhubeka nokuqhubekisela phambili izicelo zabo zamaselula, njengoba ama-38% anedivayisi ephathekayo kepha angayisebenzisi ukuthenga izithombe ezithi umkhiqizo azinkulu noma azicacanga ngokwanele, kanti u-30% uthe kunzima ukuqhathanisa imikhiqizo.
2015 UPS Pulse wephepha elimhlophe le-Online Shopper - Ekhaya
I-2015 UPS Pulse ye-Online Shopper infographic - Eyasekhaya
I-2015 UPS Pulse yesifundo esiphezulu se-Online Shopper - Ekhaya
Tags: Facebookukulethwa kwamahhalaukuthengwa kwe-inthanethiPinterestlokuthumelaups
Ukuqoshwa Okumangalisayo kwe-ICRE yi-Ink Factory Studio
Sep 14, 2015 ku-8: 51 AM
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngalolu lwazi oluhle nezibalo!